कृषि कार्यालयका प्रमुखज्यू, तपाईका जेटिएहरु कहाँ छन् ? – Chitwan Post
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखज्यू, नमस्कार !
तपाईं यो जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयको प्रमुखका रुपमा आउनुभएको छ । अन्य जिल्लामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी काम गर्दै आउने–जाने क्रममा तपाई अहिले चितवनको कृषि क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिका लागि जिल्लामा आउनुभएकाले तपाईंलाई स्वागत गर्छु । यो जिल्लाको विषयमा तपाई परिचित भैसक्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ, किनकि तपाईं आएको अलि समय बितिसकेको छ । समाजमा अहिले दुईथरी चटारो छ । दल र उम्मेदवारलाई चुनावी हतारो छ भने कृषकलाई बाली भित्र्याउने चटारो छ । आज मैले यो खुलापत्रमार्फत चुनावी हतारोभन्दा कृषकको चटारोलाई मध्यनजर राखी तपाईंलाई केही जिज्ञासाहरु राख्दैछु । तपाईंले चितवनको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
म आफू एक कृषक परिवारमा जन्मिएको नागरिक हुँ । मैले हरेक दिन कृषि–कर्ममा पनि समय लगाउँदै आएको छु । वर्षभरि खानका लागि आफूसँग भएको जग्गाजमिनमा बाली लगाउने र पशुपालन गर्ने मेरो कृषि–कर्म रहेको छ । दैनिक रुपमा केही न केही काम मैले गर्दै आएको छु । जिल्लामा रहेका हरेक नागरिक कृषि पेसासँग कुनै न कुनै प्रकारले आबद्ध रहेका छन् । आफैँले कृषि–कर्म नगरे पनि धरै मानिसहरु अप्रत्यक्ष रुपमा कृषिसँग आबद्ध रहेका छन् ।
चितवन कृषिका लागि उर्वर भूमिका रुपमा परिचित छ । समथर क्षेत्र, बाली उव्जनीका लागि प्रख्यात जिल्ला हो, चितवन । जिल्लाको भू–बनौट कृषि उत्पादनको लागि उपयुक्त छ । यहाँ पहाडी क्षेत्र पनि छ, तराईको समथर क्षेत्र पनि छ । मौसमअनुसारको बाली उत्पादन हुँदै आएको छ । फलफूल, तरकारी, अन्नबालीलगायत कृषिका अन्य सबै बाली चितवनमा उत्पादन हुँदै आएका छन् ।
तपाईंसँग मेरा केही जिज्ञासाहरु पनि रहेका छन् । चितवनमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका धेरै कृषकहरुले कृषिका जेटिएहरुको अनुहार नदेखेको लामो समय भएको छ । काम विशेषले जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुसँग भेटघाट हुँदा अधिकांशले कृषिका जेटिएहरुको अनुहार नदेखेको लामो समय भएको बताएका छ्रन् । तपाईंको कार्यालय र त्यस कार्यालय मातहतमा रहेको सेवा केन्द्रहरुमा कति जना जेटिएहरु कार्यरत छन् ? भन्ने विषय नै अहिले पछिल्लो समयमा अन्यौलपूर्ण बनेको छ । धेरै कृषकहरुलाई सरकारी निकायमा काम गर्ने प्राविधिकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा आएर सेवा दिन्छन् भन्ने कुराकै विश्वास लाग्न छाडिसकेको छ ।
तपाईंको मातहतमा रहेका कृषिका प्राविधिकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषकहरुलाई सेवा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? जनशक्ति थोरै होला, साधनस्रोत कम होला तर भएको जनशक्ति र साधनस्रोत के साँच्चीकै ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुलाई लक्षित भएर प्रयोगमा ल्याइएको छ त ? तपाईंले एक पटक गहिरोसँग समीक्षा गरिदिनुहोला । व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने केही कृषककोमा तपाईंका प्राविधिक पुगेको भए पनि त्यसभन्दा बाहेकका कृषकहरुले जिल्लामा रहेका कृषि प्राविधिकहको अनुहार नदेखेको लामो समय भैसकेको छ । तपाईंले यो विषयमा गम्भीर भएर सोचिदिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
तपाईंको कार्यालय र सेवा केन्द्रमा रहेका प्राविधिकहरु कृषकको समस्या भएका क्षेत्रमा पुग्न मान्दैनन् । यसरी कृषकको अनुरोधलाई नमानेर अटेरी गरेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । सेवा केन्द्रमा रहेका प्राविधिकले सो सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने गाविस र क्षेत्रका बासिन्दाको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? सके कार्यालयमै उपस्थित नहुने, भए कार्यालयमै समय बिताउने रोग तपाईंका प्राविधिकहरुमा रहेको छ । यसतर्फ पनि तपाईंको ध्यान जाओस् ।
तपाईंलाई जानकारी छैन होला, गत वर्ष यही मौसममा कृषकको धानबालीमा समस्या आएको थियो । पाकेको धानका बाला कटुवाले काटेर खेतभरि बनाएको थियो । यो समस्याले जिल्लाका धेरै कृषकहरु पीडित भएका थिए । तत्कालीन समयमा कृषि कार्यालयले गर्न सक्ने अवस्था केही थिएन, किनकि समय घर्केको थियो । तर, यो वर्ष त्यो समस्या आउन नदिनको लागि तपाईंको कार्यालयबाट केही नयाँ पहल भएको पाइएको छैन । विगतमा भएको त्यो समस्या समधानका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्ने थियो कि थिएन ? अहिले पनि त्यो कटुवाका समस्याहरु देखिन थालेका छन् । समयमै कृषकहरुलाई त्यसको रोकथामका उपायहरुका वारेमा जानकारी गराइएको भए यो वर्ष दोहोरिने थिएन होला ।
माथि उल्लेख गरिएको कटुवाको समस्या त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यस्ता कृषि बालीमा आएका कयौँ समस्याहरुलाई निराकरण गर्नका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । कृषिको समस्या समाधान गर्नका लागि अन्य जिल्लाको तुलनामा चितवनमा सहज छ भन्ने मेरो वुझाइ छ, किनकि कृषि विश्वविद्यालय रामपुरमा छ । तर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले त्यो विश्वविद्यालयमा कृषि विषयमा अध्ययनरत प्राविधिक र विज्ञसँग समन्वय गर्न सकेको पाइँदैन । कृषिमा आउने हरेक समस्याका विषयमा उनीहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सके परिणाम राम्रो आउने थियो कि ?
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्लामा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न तपाईंको कार्यकालमा पक्कै केही परिवर्तन हुनेछ भन्ने आश गरेको छु । जिल्लामा रहेका कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुलाई तपाईंको कार्यालयको सेवा पुग्नेछ । त्यसको उपभोग गर्न पाउने छु भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
जिल्लाको कृषि भूमिमा चाप बढिरहेको छ । अन्य जिल्लाबाट बसाइसराई गरेर आउनेहरुको जमात बढेको छ । कृषि भूमिको गुणस्तर पनि बिग्रिएको छ । माटोमा अम्लीयपन बढेका विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । जथाभावी रासायनिक मल प्रयोगका कारण चितवनको उब्जनी भूमिमा समस्या बढ्दै गएको छ । यसमा कमी ल्याउनका लागि प्रभावकारी अभियान चलाइदिनुहुने छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
जिल्लाका केही क्षेत्रमा अर्गानिक खेतीप्रणाली सुरू भएको छ । तर, बजार अभावका कारण अर्गानिक तरकारीखेतीमा समस्या बढ्दै गएको छ । यसतर्फ पनि सोचिदिनुहोला । चितवनका पहाडी क्षेत्रहरुमा भूक्षयको समस्या रहेको छ । ठाउँअनुसारका फलफूल र पशुपालन गर्न अनि गराउन तपाईंको कार्यालयको उपयुक्त ध्यान गएको पाइएको छैन, यसतर्फ पनि ध्यान जाओस् । पहाडी गाविसमा चेपाङ बस्ती रहेकाले खोरिया फँडानी गर्ने क्रम यथावत् छ । यसलाई कम गर्नुपर्ने हो कि ? पहाडी क्षेत्रमा यातायातको समस्याका कारण उब्जनी भएका अन्न, तरकारी र फलफूलले बजार पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा रहेर कृषि–कर्ममा लागेका कृषकहरुलाई दिने सेवासुविधा के हो भन्ने विषयमा पनि समस्या रहेको छ । तपाईंको कार्यालयले जिल्लाका कृषकहरुलाई दिने सेवासुविधाहरु के–के हुन् भन्ने विषयमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका हरेक कृषकले थाहा पाउनु पर्ने हो कि होइन ? यसतर्फ तपाईंको ध्यान जान जरूरी छ ।
जिल्लामा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीले बजार पाउँदैनन्, तर भारतबाट आएका कृषि सामग्रीहरु सस्तो मूल्यमा बिक्री भैरहेका छन् । गुणस्तर कम भए पनि भारतीय सामग्रीहरुको बिक्री बढ्ने तर जिल्लाको कृषि उत्पादनले बजार नपाउने, यो समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईंको कार्यालयका तर्फबाट के पहल हुन सक्छ, तत्कालै ध्यान दिन जरूरी छ ।
चितवनलाई कृषि पर्यटन क्षेत्रका रुपमा पनि अगाडि बढाउन विभिन्न समयमा कार्यक्रमहरु हुँदै आएका थिए । यो विषयमा पनि तपाईंको ध्यान जान जरूरी छ । देशको बीचभागमा पर्ने जिल्ला भएका कारण यसको सम्भावनालाई पनि ख्याल राखिदिनुहोला । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका धेरै कृषि र पशुपालनमा आबद्ध महिला समूहहरुले देश–विदेशका धेरै समूहहरुलाई भ्रमण टोलीका रुपमा भित्र्याएका छन् । त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि तपाईंको भूमिका बढोस् ।
जिल्लामा केही कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु रहेका छन् । त्यसलाई अझै राम्रो व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईंको कार्यालयको सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य गरेका ती कृषि उपज केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न र गराउन तपाईंको पहल हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । व्यावसायिक रुपमा कृषि–कर्ममा लाग्ने युवाहरुको जमात बढ्दै गएको छ । उनीहरुलाई कृषि तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम आवश्यक रहेकाले यसतर्फ पनि तपाईंको ध्यान जान जरूरी छ । अवैध रुपमा बिक्री भइरहेका नक्कली विषादीहरुको नियन्त्रणमा तपाईंको ध्यान जानुपर्छ ।
अन्तमा, तपाईंको कार्यालयको भौतिक संरचनाको संरक्षणका लागि तपाईंको प्रयास के हो ? जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र मातहतमा रहेका सेवा केन्द्रको भौतिक संरचना हेर्ने हो भने त्यसको संरक्षण भएको पाइँदैन । कार्यालयको कोठा, कार्यालयको भवन, कार्यालयको अन्य भौतिक संरचना तपाईंको अगाडि नै बेवारिसे र बिजोग अवस्थामा रहँदा तपाईंले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । तपाईंको कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकहरुका समस्याका बारेमा तपाईंले कहिले, कसरी बुझ्ने गर्नुभएको छ ? सेवा लिने र दिने क्रममा भएका वा आएका समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईंको पहल के भइरहेको छ ? तपाईंको कार्यालयमा तपाईंले नागरिकको गुनासो सुन्ने अधिकारीसमेत तोक्नुभएको छ, के साँच्चीकै ती गुनासो सुन्ने अधिकारीले नागरिकका गुनासा सुनेकै छन् त ? कहिल्यै समीक्षा गर्नुभएको छ ? व्यक्ति तोकिदिएर मात्र समस्या समाधान हुन्छ कि त्यसको कार्य व्यवस्थापनका लागि नागरिकलाई सहज प्रक्रियासमेतको विकास हुनुपर्छ ?
तपाईंको कार्यालयमा रहेको गुनासो पेटिकाको अवस्था कस्तो छ ? कृषकको गुनासो सुन्नका लागि राखिएको फोन सेवाको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने हो कि ? समीक्षा गरिदिनुहोला । अझै मह¤वपुर्ण कुरा, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकलाई समयमै सेवासुविधा नदिइएमा वा ढिलासुस्ती भएमा समयको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिने व्यवस्था भएको भन्ने सुनिन्छ । तपाईंको कार्यालयमा त्यो लागू हुन्छ कि हुन्न ? जिज्ञासा छ ।
समस्या जहाँ पनि छन्, तर सरकारको मातहतमा चल्ने निकायमा समस्या भएको राम्रो होइन । जनताका करबाट चलेका जनताका कार्यालयमा भएका लापर्बाही जनताले नै देख्नुपर्दा मन खुसी हुने अवस्था आउने रहेनछ । त्यसैले, आगामी दिनमा दिन कटाएर सरूवा हुने र बसुन्जेल त हो नि भन्ने भावनालाई त्यागी रहुन्जेलसम्म राम्रो गरेर देखाइदिनुस् । जिल्लामा रहेका कृषि जेटिएहरुलाई कम से कम समस्या पर्दा कृषकसँग भेट हुने वातावरण बनाइदिनुस् । भोलिका दिनमा अवस्था राम्रो हुने अपेक्षा छ ।